“Ebu M n’Obi Ịghọ Ụkọchukwu” | Baịbụl Na-Agbanwe Ndụ Ndị Mmadụ
Gịnị Mere Ụfọdụ Ndị Ji Ekwu na Obi Tara Chineke Mmiri?
Ọdachi Ndị Na-emere Onwe Ha—Hà Na-egosi na Obi Tara Chineke Mmiri?
Mbibi Chineke Bibiri Ndị Mmadụ Ọ̀ Na-egosi na Obi Tara Ya Mmiri?
Ị̀ Ga-atụkwasị Chineke Obi?
“Ebu M n’Obi Ịghọ Ụkọchukwu”
Jehova Ọ̀ Hụrụ Gị n’Anya n’Eziokwu?
Ùnu Chere na Ọ Bụ Naanị Unu Ka A Ga-azọpụta?
ỤLỌ NCHE MEE 2013
Akụkọ Roberto Pacheco kọrọ
A MỤRỤ M N’AFỌ: 1957
ABỤ M ONYE: MEKSIKO
NDỤ M BIRI: M GỤRỤ AKWỤKWỌ N’ỤLỌ AKWỤKWỌ NDỊ ỤKỌCHUKWU; ABỤKWA M ONYE IWE ỌKỤ
A mụrụ m n’obere obodo a na-akpọ Tekskoko. N’oge ahụ, e tebeghị ọtụtụ okporo ụzọ dị n’obodo a korota, ha na-adịkwa uzuzu uzuzu. Ndị mmadụ na-esikarị n’obodo nta ndị dị nso n’obodo anyị duru ịnyịnya ibu ha ndị bu ngwá ahịa bịa na-ere n’obodo a. Ezinụlọ anyị dara ogbenye. Abụkwa m nwa nke asaa n’ime ụmụ itoolu nne na nna m mụrụ. Papa m na-arụzi akpụkpọ ụkwụ. Ọ bụ ya ka o ji akpa afọ ezinụlọ anyị. Ma mgbe m dị afọ asaa, papa m nwụrụ. Malitezie mgbe ahụ gawa, ọ bụ mama m jisiri ike na-akpa afọ ezinụlọ anyị.
Nna m ochie na-akpọ ụbọ, ọ bụkwa ya na-eduzi òtù egwú na-akụ egwú chọọchị ndị na-atọ ezigbo ụtọ. Ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ n’ezinụlọ anyị nwere ụdị ngwá egwú ọ na-akpọ. Mama m so ná ndị na-ekwe ukwe na chọọchị anyị, nwanne papa m na-agụkwa egwú, na-apịkwa pịano. Anyị bụ ndị Katọlik, anyị anaghịkwa eji ịga chọọchị egwuri egwu. Ana m ejere ụkọchukwu ozi n’elu ọlta n’oge ọ na-edo mas, ebukwa m n’obi na m too, m ga-aghọ ụkọchukwu Katọlik nke a ga-eziga mba ọzọ. Ma n’otu oge ahụ, ọ na-atọ m ụtọ ikiri fim ndị na-agba karat. Fim ahụ m na-ekiri mgbe niile bịara mee ka ime ihe ike marakwuo m ahụ́.
N’otu obodo a na-akpọ Puebla, m banyere otu ụlọ akwụkwọ ebe a na-azụ ndị ụkọchukwu. M bu n’obi ịghọ ụkọchukwu. Ma n’afọ m ga-apụta n’ụlọ akwụkwọ ahụ, ihe a na-eme na chọọchị Katọlik gbụrụ m. N’oge ahụ, otu sista bịara na-achọ ka mụ na ya nwee mmekọahụ. Ekweghị m ka o nweta m. Ma ihe ahụ o mere mere ka agụụ ịlụ nwaanyị gụwa m. Ihe ọzọkwa gwụrụ m ike bụ na ihe ọtụtụ ndị ụkọchukwu na-eme bụ soro okwu ọnụ m, esola omume m. M mechara kpebie na agaghị m abụkwa ụkọchukwu.
Mgbe m bụ nwata, ana m ejere ụkọchukwu ozi n’elu ọlta n’oge ọ na-edo mas, ebukwa m n’obi ịghọ ụkọchukwu Katọlik nke a ga-eziga mba ọzọ. Ma n’otu oge ahụ, ọ na-atọkwa m ụtọ ikiri fim ndị na-agba karat. Fim ahụ m na-ekiri mgbe niile bịara mee ka ime ihe ike marakwuo m ahụ́
M kpebiziri na m ga-aga mụọ ịkụ egwú n’ebe a na-akụzi ịkụ egwú na Meksiko. Mgbe m gụchara, m lụrụ nwaanyị, mụ na nwunye m mụkwara ụmụ anọ. M na-agụ egwú na chọọchị Katọlik n’oge a na-edo mas, ọ bụkwa ya ka m ji akpa afọ ezinụlọ m.
Malite mgbe m lụrụ nwaanyị, mụ na nwunye m anaghị ebi n’udo. Anyị na-emesi ibe anyị ike. Ihe kpatara ya bụ na anyị atụkwasịghị ibe anyị obi. Anyị bu ụzọ gwawa ibe anyị okwu ọjọọ, mechazie na-alụ ọgụ. Afọ iri na atọ anyị lụchara, anyị kpebiri na anyị ga-ekewa. Anyị mechakwara gbaa alụkwaghịm.
Oge mbụ m matara Ndịàmà Jehova bụ mgbe mụ na nwunye m ka bi. Ndịàmà Jehova abụọ bịara kụọ aka n’ụlọ anyị ma gwa anyị na ha chọrọ ịkọrọ anyị ihe Baịbụl kwuru. M chere na o nwere ezigbo ihe m ma banyere okpukpe, n’ihi ya, m kpebiri na m ga-egosi ha na ihe ha na-akụzi abụghị eziokwu. Nke a mere ka m jụọ ha ajụjụ ndị tara akpụ bụ́ ndị m chere na mmadụ agaghị azatali. Ma o juru m anya na ha ji Baịbụl zaa m ha niile nke ọma. Ọ bụ mgbe ahụ ka m matara na o nwechaghị ihe m ma na Baịbụl. Ma ebe ọ bụ na nwunye m na-akparịkarị Ndịàmà Jehova ahụ, mụnwa anaghịkwa enwe ohere, Ndịàmà Jehova ahụ kwụsịrị ịbịa na nke anyị.
Mgbe afọ ise gafere, mụ na Ndịàmà Jehova hụkwara ọzọ. N’oge ahụ, mụ na nwaanyị ọzọ aha ya bụ Elvira bizi. Elvira anaghị enye Ndịàmà Jehova nsogbu, n’ihi ya, mụ na ha mụchiwere Baịbụl anya. Ma, ọ ka were m ọtụtụ afọ tupu mụ agbanwee àgwà ọjọọ ndị m na-akpa.
Ọ bịara doo m anya na ọ bụrụ na m chọrọ iji obi m niile na-efe Jehova, m ga-agbanwe ọtụtụ ihe ná ndụ m. Nke mbụ bụ na m ga-akwụsị ịgụ egwú ahụ m na-agụ mgbe a na-edo mas. Ma, ịkwụsị ọrụ ahụ pụtara na m ga-achọ ọrụ ọzọ m ga na-arụ ka m nwee ike ịkpa afọ ezinụlọ m. (Mkpughe 18:4) Ihe ọzọ m kwesịkwara ime bụ ịlụ Elvira otú e si alụ nwaanyị.
Otu n’ime ihe kacha siere m ike ime bụ ịkwụsị iwe ọkụ m na-ewe. E nwere ụzọ ebe abụọ nyeere m ezigbo aka na Baịbụl. Nke mbụ bụ Abụ Ọma 11:5, bụ́ ebe gosiri na Jehova kpọrọ ime ihe ike asị. Nke abụọ abụrụ 1 Pita 3:7, bụ́ ebe gosiri m na ọ bụrụ na m chọrọ ka Jehova na-anụ ekpere m, m ga na-akwanyere nwunye m ùgwù. Mgbe m chebaara ihe e kwuru n’amaokwu ndị ahụ echiche ma kpee ekpere ka Jehova nyere m aka, eji m nwayọọ nwayọọ kwụsị iwe iwe ọkụ.
Baịbụl mere ka m mata na ọ bụrụ na m chọrọ ka Jehova na-anụ ekpere m, m ga na-akwanyere nwunye m ùgwù
Udo adịla ugbu a n’ezinụlọ m. M na-agbalịkwa ka mụ na ụmụ m ndị nwoke nwunye m nke mbụ mụụrụ m dịghachi ná mma. M na-agbalịkwa ike m niile inyere ndị ezinụlọ m nke ugbu a aka ka ha na Jehova dịrị ná mma.
Mgbe m bụ nwata, ebu m n’obi ịghọ ụkọchukwu ma na-enyere ndị mmadụ aka. Ma ugbu a, echere m na ndụ m abaala ezigbo uru. M na-akụzi otú e si akụ egwú. Ọ bụ ya ka m jizi akpa afọ ezinụlọ m. Obi dị m ụtọ na Jehova nweere m ndidi ma nyere m aka ka m gbanwee àgwà ọjọọ m ma bụrụ ezigbo mmadụ ugbu a.
mailto:?body=“Ebu M n’Obi Ịghọ Ụkọchukwu”%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2013326%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=“Ebu M n’Obi Ịghọ Ụkọchukwu”
MEE 2013 Obi Ọ̀ Tara Chineke Mmiri?
mailto:?body=MEE 2013 Obi Ọ̀ Tara Chineke Mmiri?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fpub%3Dw13%26issue%3D20130501%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=MEE 2013 Obi Ọ̀ Tara Chineke Mmiri?
Mee Ka Obi Ruo M Ala Naanị Otu Afọ